Shabakad Bulsho oo loogu talagalay Halyeeyada Ciidanka Badda Mareykanka! | Martech Zone
Khamiista, Noofembar 15, 2007 Khamiista, Noofembar 15, 2007 Douglas Karr
Dhowr sano ka hor, waxaan iibsaday domainka NavyVets.com. I didn't have any time to actually work on building out a site, so I put the domain up on Sedo.com si loo arko haddii wax dan ahi ka jirto iyo in yar oo doollarka xayeysiinta ah la helo. Wax yar asal ahaan macnaheedu maahan… kumanaan jeer oo la garaaco bil kasta, waxaan u maleynayay kaliya dinaar halkan iyo halkaan.
Iyada oo ay sii kordhayaan shabakadaha bulshada, waxaan bilaabay in aan tijaabiyo xirmooyinka xiriirada bulshada ee kaladuwan ee aan ku rakibi karo barta. Waan rartay Elgg but it wasn't the easiest package to customize and get working.
Waqtigaas, waxaan bilaabay inaan ka shaqeeyo astaanta goobta. Asal ahaan waxaan soo qaatay astaanta USN iyo, anigoo adeegsanaya Sawirqaade, waxaan kala saaray dhammaan lakabyada oo waxaan ku daray cabbir yar.
Maalmo ka hor, waxaan bilaabay inaan eego Ning. Markii ugu horreysay ee aan arko Ning dhowr sano ka hor waxay ahayd markii ugu horreysay Xerada Mashup. Waxay ahayd mid aad u xiiso badan… softiweerka kuu ogolaaday inaad ku qorto koodh qaas ah dusha sare ee boggooda… runti maahan shey kumbuyuutar ah, laakiin aad u xoog badan.
I did opt in for some premier ala carte options – private domain, my own advertising, and removal of all the Ning Bling. I think it's looking good! Now I just need to find some more Vets that are interested! I think it's a pretty cool story – a Navy Veteran shabakada bulshada… Waxaa iska leh oo ku shaqeeya Halyeey Navy ah!
Nov 15, 2007 saacadu markay tahay 1:10 PM
Doug, macluumaad wanaagsan, Waan ogahay dhowr qof oo folks ah oo sameynaya shabakado yar yar oo bulshada ah waxaanan la wadaagi doonaa boostadaada iyaga!
Nov 15, 2007 saacadu markay tahay 8:18 PM
Runtii waan layaabay sida ay u fududahay in la isticmaalo, JD! Waxaan u maleynayaa in qaabeynta ay adeegsan karto xoogaa caawinaad dheeri ah, laakiin halkaas ayey gaari doontaa!
Boggu wuxuu helay diiwaangelintii ugu horreysay caawa! Woohoo!
Nov 15, 2007 saacadu markay tahay 2:03 PM
Waan ku faraxsanahay inaan arko inaad wax ku bilowdeen domainka (sida heer sare ah!). Waxaan isticmaalay Ning oo leh IndyLance muddo gaaban waana fiicneyd ilaa iyo hadda. Wax badan kuma khaldin sifooyin kasta oo horumarsan, laakiin inaan fiiriyo qaar ka mid ah koodhkaaga martigelinta, adeegga bilaashka ah waa dhif iyo naadir.
Ma aanan helin waqti aan ku eego Ning API ama fursadaha ku jira Google ee Furan Bulsho. Ah, liistadeyda aan dhamaadka lahayn.
Nov 15, 2007 saacadu markay tahay 8:14 PM
Aynu si xaqiiqo ah u wadaagno qoraalada markaan fursadda helno, Nuux. Waan kula socdaa - liistadaydu aad ayey uga dheer tahay awoodda aan u leeyahay dhammaystirka howlaha!
Nov 15, 2007 saacadu markay tahay 7:46 PM
Naxariis wanaagsan, weligaa ma seexataa ?!
Haddana mashruuc kale oo qallafsan, oo qiimo leh oo ka socda Doug-meister. Nasiib wacan
Nov 15, 2007 saacadu markay tahay 8:13 PM
Xaqiiqdii waan shil galay maalintii intiisa badan maanta - waxaa i xanuunaya cuna xanuun daran. Waa calaamadda ugu horreysa ee aan ku shaqeeyo saacado badan. Waxaan heli doonaa hurdo fiican caawa oo aan ku soo laaban doono subaxa hore!
Suuq Weyn Oo Caan Ah
Nov 16, 2007 saacadu markay tahay 8:08 PM
Tani runti waa qabow. Waxaan hayaa in ka badan dhowr fikradood oo ku saabsan baraha xiriirka bulshada, oo waxaan maqlay Ning laakiin weli ma aanan tijaabin. Waa inaan ku khasbanaadaa Waxaan rajeynayaa inay tani bilaabaneyso inay adiga kuu duusho.
Suuqa weyn ee carrab la'aanta
Nov 16, 2007 saacadu markay tahay 11:26 PM
Cajiib! Goob aad u fiiqan! Waxaan maqli jiray Ning laakiin ma aanan ogeyn sida ay u xoogan tahay. Xaqiiqdi waan eegi doonaa tan. Mahadsanid!
Nov 19, 2007 at 4: 21 AM
Waan ka xumahay inaad maqashay inaad dhibaato ku qabeysay Elgg, waxaan xiiseyn lahaa inaan ogaado meesha saxda ah ee kugu adkaatay inaad dejiso. Waxyaabaha ayaa si dhaqso leh isku beddelaya Elgg, tusaale ahaan sii deynta soo socota, ee la filayo bisha Diseembar, waxaa ku jiri doona rakibe hagaajiye ah. Dheeraad ah, bulshada soo-saareyaasha Elgg waxay ku firfircoon yihiin dad badan oo ipekpers ah oo doonaya inay caawiyaan. Marka, haddii aad waligaa u baahato inaad u fidiso xubnahaaga heer sare oo ah xakameynta asturnaanta, ama aad bilowdo inaad dareento wax aan fiicnayn oo ku saabsan hal shirkad oo maareynaysa dhammaan xogtaada, waxaan kugu soo dhaweyneynaa inaad mar kale istaagto Elgg.org 😉
Nasiib wacan mashruucan!